Radio Don Bosco - Nilazalaza ny Zaza... i Ana
Anisan’ireo mahantran’ny Tompo i Ana, miandry sy miantehitra ny fanavotana araka ny nampanantenain’Andriamanitra tamin’ny vahoakany. Ny fiainan’i Ana manontolo no nanehoany ny fiandrandrana izany, tamin’ny fanompoana nataony tao an-tempoly, ny vavaka sy ny fifadian-kanina, fomba itadiavana sy anatonana ny Mpamonjy, ikatsahana an’Andriamanitra. Mampianatra antsika hitady ny Tompo ny nataon’ity mpaminany vavy ity, nanoro antsika koa ny fomba tsy hahatapaka ny fifandraisana Aminy.
Tao an-tempoly no nandaniany, niandrasany ilay Mpamonjy nampanantenaina. Ary rariny sy hitsiny raha toa ka tojo ity nantenainy izy, tafahaona tamin’i Jesoa Zazakely. Io nataon’i Ana io no mampianatra fa ao an-tranony Andriamanitra no miandry antsika, ao Izy no miteny amintsika, ary amin’ny vavaka sy fifadian-kanina no hikolokoloan ny fifandraisana Aminy.
Tsy fomba fanao mahazatra ny famonjena fiangonana ho antsika, fa fihaonana amin’ilay Mpamonjy. Enga anie mba homentsika lanja ary tsy hatao ambanin-javatra fa adidy maneho ny maha isika antsika eo anatrehan’Andriamanitra izany. Jesoa zokinay ô, tonga eto anivonay Ianao, tonga hanafaka alahelo an’ireo mitady Anao amim-po mahitsy. Aza avela ho variana foana amin’ny zava-mandalo izahay fa ataovy tsara fifandraisana Aminao mandrakariva.